အရက်​သမားပို့စ်​ -၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အရက်​သမားပို့စ်​ -၃	16
Posted by naywoon ni on May 4, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 16 comments
အရက်​သမား ပို့စ်​ -၃
​နေ၀န်းနီ တို့ အရက်​စ​သောက်​တတ်​တဲ့ အချိန်​ကို ပြန်​​ပြောင်းကြည့်​ရင်​​တော့ အရက်​​သောက်​ကြတဲ့သူ​တွေဟာ အချိန်​​တွေပို​နေတာရယ်​ ။ ပိတ်​မိ​နေတဲ့ လူမှုအသိုက်​အအုံထဲက​နေ ထွက်​​ပေါက်​ရှာတာရယ်​ သွား​တွေ့တယ်​ ။ ​ကျောင်းချိန်​ အလုပ်​ချိန်​က​နေ အားလပ်​တဲ့ အချိန်​​တွေမှာ ​ဖျော်​​ဖြေ​ရေးကိစ္စ မရှိသ​လောက်​ ။ စိတ်​ပါဝင်​စားရာ အ​တော်​များများ လုပ်​ခွင့်​မရှိဘူး လို့ကန့်​သတ်​ခံထားရတဲ့ ဆိုရှယ်​လစ်​​ခေတ်​​နှောင်းပိုင်း ။ ရန်​ကုန်​နဲ့ မန္တ​လေး မှာကလွဲရင်​ ကျန်​တဲ့နယ်​​တွေမှာ စိတ်​အပမ်း​ဖြေစရာ တီဗွီ ဗီဒီယို လက်​ချိုး​ရေလို့ရတယ်​ ။ တစ်​လမ်းလုံးမှ လျှပ်​စစ်​မီး သုံးနိုင်​တဲ့အိမ်​ လက်​ညိုးထိုးပြီးလိုက်​​ရေလို့ရတယ်​ ။ ​ပြောမဲ့သာ​ပြောရတာ အဲ့အချိန်​က အရက်​ဆိုင်​ ဆိုတာက အစိုးရ စား​ဖျော်​နဲ့ အမိန့်​ရ အရက်​ဖြူဆိုင်​ပဲ ရှိတာ ။ အပြင်​ဆိုင်​ဆိုလို့ ​ခေါက်​ဆွဲ​ကြော်​​ရောင်းတဲ့ တရုပ်​ဆိုင်​နဲ့ ​ပျော်​ပွဲစားရုံ ဆိုတာ​လောက်​ပဲ ။ မြို့ ကန့်​လန့်​နားသပ်​ ဆင်​​ခြေဖုံးမှာ​တော့ ရိုးရာ အရက်​ချက်​​ရောင်းတဲ့ အိမ်​​လေး​တွေပဲရှိတယ်​ ။ ဘီယာဆိုတာ ဘာမှန်း​တောင်​မသိတတ်​​သေးဘူး ။
ရာသီဥတု ပူတဲ့ အချိန်​ဆို ​ရေကို ​နေလှမ်း​သောက်​ရသလိုလို ​နွေး​တေး​တေးနဲ့ လည်​​ချောင်းဝ​ရောက်​​တော့ ပူဆင်းသွား နှာ​ခေါင်းက ထုတ်​လိုက်​တဲ့ ထွက်​သက်​မှာ အရက်​နံ့က ကပ်​ပါသွား ။ ရင်​​ခေါင်းထဲ​ရောက်​​နေတဲ့ အရက်​က ပူပူ ။ ​ရေ​သောက်​ချင်​​သောက်​ မ​သောက်​ချင်​ ရှိတဲ့ အမြည်း (​မြေပဲဆံ​လှော်​လို ငါးမုန့်​​ကြော်​လို ) ​ကောက်​ဝါး ။ တစ်​ကယ်​တမ်းကျ​တော့ အဆီ အဆိမ့်​ များတဲ့ ​မြေပဲ ၀က်​သား အာလူး တို့နဲ့ အမြည်းလုပ်​ရင်​ မြန်​မြန်​မူး​စေတတ်​တယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီတို့ အရက်​စ​သောက်​ချိန်​က ​ရေ​ရောမ​သောက်​တာကများတယ်​ ။ အရက်​​တွေက ဒီအချိန်​​လောက်​မပြင်း​သေးတာလဲပါတယ်​ ။ လူက ​သွေးသားတက်​ခါစ ဆို​တော့ အရက်​ရဲ့ ဒဏ်​ကို ခံနိုင်​ရည်​ရှိ​နေတာလည်းပါမယ်​ ။ ပြီး​တော့ အရက်​​သောက်​တဲ့သူ ​တော်​​တော်​များများက အမြည်းကို ပါတယ်​ဆိုရုံ ​လောက်​ပဲ ။ အမြည်းဘိုးနဲ့ အရက်​ဘိုး မှာ အမြည်းဘိုးကိုပိုပြီးနှ​မြောကြ​သေးတယ်​ ။ အမြည်းတစ်​ကျပ်​ဖိုးဝယ်​စားမဲ့အစား အရက်​တစ်​ကျပ်​ဖိုး ပို​သောက်​လိုက်​ကြတာချည့်​ပဲ ။ အမြည်းအစားနည်းပြီး အရက်​များများ​သောက်​ ပြီး​တော့ အမူးလွန်​တဲ့အခါ အိပ်​​ပျော်​သွား ။ ညစာထမင်းလွတ်​သွားတာများရင်​ လူရဲ့ ခံနိုင်​ရည်​အားကျဆင်းသွားတာပဲ ။ အရက်​က ​သောက်​တုန်းခဏ ​သွေးလည်​ပတ်​မှု မြန်​ပြီး အိပ်​​ပျော်​သွားရာက ပြန်​နိုးလာတဲ့အခါ ​သွေးကပို​လေးသွားတယ်​ ။ အိပ်​​နေရာက မှိန်းပြီး ​နေချင်​​တော့တာ ။ အဲ့အချိန်​မှာ ​ရေ​သောက်​တာနဲ့ ဆီးသွားတာကလွဲရင်​ ဘာမှမလုပ်​ချင်​​တော့တာ ။​မှေးကနဲ့ အိပ်​​ပျော်​သွားလိုက်​ နတ်​သမီး​လေး​တွေနဲ့ နဘမ်းလုံးလိုက်​ ။ ပြန်​ပြီးလန့်​နိုးလာလိုက်​နဲ့ မနက်​မိုးလင်းမှသာ မထချင်​ထချင်​နဲ့ ထပြီးမျက်​နှာသစ်​ ။ ​ရေချိုးတန်​ချိုးနဲ့ လူလည်းနဲနဲလန်း အဲ့အခါကျမှ ညကမစားခဲ့တဲ့ညစာအတွက်​ အတိုးချဗိုက်​ဆာ​တော့တာ ။ အရက်​မှာ ကယ်​လိုရီ အများကြီးပါတယ်​ ​ပြောတာပဲ ။ အဲ့ဒါ​ကြောင်​လား မသိဘူး ။ ​တော်​ရုံတန်​ရုံ မလုပ်​နိုင်​တဲ့ မတွန်းနိုင်​မဆွဲနိုင်​တဲ့ အရာ​တွေ တွန်းနိုင်​ဆွဲနိုင်​ကြတယ်​ ။ ဦ​နှောက်​က တစ်​ခြားအချိန်​ထက်​ ​ပေါ့ပါး​နေသလားမ​ပြောတတ်​ဘူး ။ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ချတာလည်းမြန်​တယ်​ ။ ​ဒေါသထွက်​စရာရှိရင်​လည်း ရှူးဆို ဒိုင်းကနဲ ။ အဟာရဆရာ တစ်​ပါးအလိုအရ​တော့ ကယ်​လိုရီက ဓာတ်​ဆီ/ ဒီဇယ်​နဲ့ တူသတဲ့ ။ ပရိုတိန်းက အင်​ဂျင်​၀ိုင်​တို့ 2D တို့နဲ့တူသတဲ့ ။ အင်​ဂျင်​စက်​တစ်​လုံးကို ဒီဇယ်​ချည့်​ထည့်​​မောင်း​နေ အင်​ဂျင်​၀ိုင်​ လုံးလုံးမပါပဲနဲ့ ဆိုရင်​ အဲ့အင်​ဂျင်​ကခဏ​လေးနဲ့ ကျသွားမှာပဲတဲ့ ။ လူကလည်း အရက်​ချည့်​​သောက်​ပြီး အခြား အဟာရ ဖြည့်​မ​ပေးရင်​ ခဏ​လေးနဲ့ ကျသွားမှာပဲတဲ့ ။ အရက်​​သောက်​တဲ့သူက အစာကို သာမာန်​ထက်​ပိုစား​ပေးရသတဲ့​လေ ​နေ၀န်းနီ တို့က အရက်​စ​သောက်​ပါပြီဆိုကတည်းက No Limit . လစ်​မစ်​ ဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိခဲ့တာ ။ ​သောက်​နိုင်​သ​လောက်​​သောက်​ မူးလှမကမူးမှ ။ ဒါမှမဟုတ်​ ပါလာတဲ့ ပိုက်​ဆံကုန်​မှ အရက်​ဆိုင်​က ထပြန်​ချင်​တာ ။ ဝါသနာတူ မိတ်​​ဆွေနဲ့ စကားဆက်​ကမပြတ်​နိုင်​ ။ ​ကျောင်းမှာ အီး​မေဂျာက ကိုမြင့်​​ဇော်​တို့ ကို​မောင်​​မောင်​တို့နဲ့ တွဲ​သောက်​မိမှ အရက်​​သောက်​ရင်း ကဗျာ​ရေးတဲ့ အကျင့်​က ပါလာ​သေး​တော့ အရက်​​သောက်​တဲ့ ကိစ္စ ​နောက်​ပိုင်းအ​ဖော်​မပါလည်းရတယ်​ဆိုတာမျိုး​တွေဖြစ်​လာ​ရော ။ ဟုတ်​သင့်​သ​လောက်​လည်း ဟုတ်​ပါတယ်​ ။ အရက်​​သောက်​ရင်း​ပေါ်လာတဲ့ စိတ်​ကူး​လေး​တွေ စကားလုံး​လေး​တွေက ​နောက်​ကျရင်​ မှတ်​ဉာဏ်​ထဲပြန်​​ဖော်​မရ​တော့ နှ​မြောစရာ​ကောင်းတယ်​ဆိုတဲ့ အ​တွေးနဲ့ အရက်​​သောက်​ရင်း ကဗျာ​ရေးမိဖူးပါရဲ့ ။ အဲ့ ကဗျာ​ရေးရင်း အရက်​​သောက်​တယ်​လို့ ​ပြောရမလားမသိ ။ ​နေ၀န်းနီ
မြစပဲရိုး says: . ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ အနုပညာသည် တော်တော်များများ ဆေးသုံးကြတာ အဲဒီလို အကြောင်းရှိမှာပါ။
ဒါကြောင့်လဲ နာမည်ကျော်လာတဲ့ သူ တွေ ဆို အစပိုင်းမှာ ဆေး စစွဲ အောင် အလကား နီးပါးပေးပြီး နောက် တကယ်စွဲ လာတော့ သူတို့ ရဲ့ ဘဏ်တိုက်ကြီး ဖြစ်ရောပေါ့။
အရက် ကလဲ အဲဒီလို ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဖီလင် ရမှာပေါ့ နော။
ဒါပေမဲ့ အဘနီ ရယ် ကြားသမျှ သူတို့ ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်း ဟာဖြင့် မရှိတာ များနေတာရော။
အဲဒါကိုလဲ နောက်ပေါက်များ က သင်ခန်းစာ မယူနိုင်ကြ ဘဲ အဲဒီလမ်း ကို ဘဲ လိုက်နေကြတာ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။
အဲဒီလို မူးယစ်ဆေး မပါရင် အဲဒီ အလုပ် က မဖြစ်ဘူး တဲ့လား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ဆြာနီ့ပို့စ်ဖတ်ပြီး ထီးဆိုင်ရဲ့ နွေနံနက်ခင်းသီချင်း သွားသတိရတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12169
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်ကတော့ အရက်စက်ရုံ တစ်ရုံမှာ အလုပ် ဝင်လုပ်ဖူးတာကစ…. အရက်ကို မြည်းစမ်း သောက်ကြည့်နိုင်သွားတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: သများ အရက်ပို့(စ) လေး ကြော်ညာ ဝင်ပါရစေ။
လူအများက အရက်ဟုခေါ်ကြသော ethyl alcohol ဟာ အနည်းငယ်သာ သောက်သုံးလျှင် စိတ်ကြွမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အများအပြား သောက်သုံးသူများတွင်တော့ ပင်မ အာရုံကြောစနစ်ကို ဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့် အအိပ်လွန်သည်မှ အသက်ရှုရကျပ်ခြင်း ၊ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။Alcohol ကို အစာအိမ်နှင့် အူသိမ်တို့မှ စိမ့်ဝင်ခြင်းနည်းဖြင့် စုပ်ယူပါတယ်။ သောက်သုံးပြီး တနာရီအတွင်းတွင် အူသိမ်နှင့်အစာအိမ်တို့မှစုပ်ယူပါတယ်။ပျမ်းမျှအားဖြင့်အူသိမ်တွင် သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းသောကြောင့် သောက်သုံးသောပမာဏရဲ့ ၈၀ % ခန့်ကိုစုပ်ယူပြီး ၊ အစာအိမ်မှ ၂၀ %ခန့်ကိုစုပ်ယူပါတယ်။Alcohol ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ စုပ်ယူမှုနှုန်းဟာ အစာအိမ်တွင် ရှိသော အစာ၏ပမာဏ၊ အစာအိမ်နံရံများ ၏ အခြေအနေ၊ စားထားသော အစာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး စုပ်ယူမှုနှုန်း ကွာခြားပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် များလေလေ သင့်ရဲ့သွေးထဲမှာ alcohol ရှိနိုင်မှုပမာဏ နည်းလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်အလေးချိန် များလေလေ သင်သိပ်မမူးပဲ နေနိုင်လေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသားများမှာ alcohol ကိုချေဖျက်ပေးမဲ့ အင်ဇိုင်းများ ပိုမိုထုတ်တာကြောင့် မိန်းကလေးတွေလောက်မမူးတတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးများမှာ ရာသီစက်ဝန်း၊သန္ဓေတားဆေး သောက်သုံးထားခြင်းများအပေါ်တွင်မူတည်ပြီး သွေးထဲတွင်ရှိနိုင်သော ပမာဏကွဲပြားတတ်ပါသေးတယ်။
အရက်မသောက်မှီ ပရိုတိန်းပါတဲ့ အစာများများ စားထားမယ်ဆိုရင် သင်သိပ်မူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆီများတဲ့ အစားအစာများဟာ အရက်ကို စုပ်ယူမှုနှုန်း နှေးစေပါတယ်။
အရက်ဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို ကျဆင်းစေပါတယ။် ဒါကြောင့် သင်ဟာ အရက်မသောက်ခင်က စိတ်အနည်းငယ် ညစ်နေမယ်ဆိုရင် သင်တညလုံးသောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အရင်ထက်ကိုစိတ်ညစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ။်
နည်းနည်းချင်းနှင့် ဖြေးဖြေးသောက်သုံးခြင်းထက် အချိန်တိုအတွင်းမှာ အများအပြား ကို တကျိုက်တည်း သောက်သုံးခြင်းက သင့်သွေးထဲရှိ အရက်ပမာဏကို ပိုတက်စေပြီး သင့်ကိုပိုမူးစေပါလိမ့်မယ်။
အရက်ပြင်းအား များလေလေ သွေးထဲတွင်ရှိသော alcohol level မြင့်တက်လေ ဆိုသော်လည်း 10% alcohol သည် စုပ်ယူမှု အားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Alcohol ကို အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ၊ ချွေး၊ ၀မ်း ၊ ဆီးတို့မှ တဆင့် စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ Alcohol ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ စွန့်ထုတ်သော ပမာဏသည် လူတဦးတယောက်စီအတွက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပုံသေဖြစ်ပါတယ်။ သွေးထဲတွင်ရှိသော alcohol ပမာဏသည် တနာရီတွင် ၁၅ % လျှော့ကျလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးထဲတွင်ရှိသော Alcohol ပမာဏသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော alcohol ပမာဏကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
သောက်သုံးသော ပမာဏအလိုက် သွေးထဲတွင် ရှိနေသော alcohol level ပေါ်မူတည်ပြီးအောက်ပါ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
သွေး ၁ မီလီလီတာတွင် အရက် ၂ မီလီဂရမ်ပါဝင်နေသည်. ပမာဏကို အဆင့် ၁ ဟု သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည။်
ထိုအချိန်တွင် အရက်သေစာ သောက်သုံးထားသူသည် အူမြူးနေတတ်ခြင်းမိမိ၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု စွမ်းအား ကျဆင်းနေခြင်း၊မိမိဦးဏှောက်၌ မသိစိတ်များ လွှမ်းမိုးနေခြင်းစကားများ များပြောနေတတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တခါတရံတွင် မိမိ၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်နှင့် ပြောင်းပြန် ပြုမူနေတတ်ခြင်းသက်တောင့်သက်သာ ရှိနေခြင်း
စိတ်ဖိစီးမှုများ လျော့နည်းလာခြင်းမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲနေတတ်ခြင်းလူမှုရေးအရှုပ်အထွေးများ ဖြစ်ပေါ်စေရနအားပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
သွေး၁ မီလီ လီတာတွင် အရက် ၂-၃ မီလီဂရမ်သည် ရှိနေသော ပမာဏဟု သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည။် ထိုအချိန်တွင် အရက်သေစာ သောက်သုံးထားသူသည်မိမိ၏ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို သိသိသာသာ မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း။အာလေးလျှာလေး ဖြစ်လာခြင်း။သတိလက်လွတ်စကားများ ပြောတတ်လာခြင်း။ ကိုယ်နေဟန်ချက်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ခြင်း။အာရုံစိုက်၍အသေးစိတ်လုပ်ရသောလုပ်ငန်းများကိုမလုပ်နိုင်တော့ခြင်း။မိမိကိုယ်ကိုမထိန်း
သိမ်းနိုင်တော့ခြင်း။စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ကိုင်လာခြင်း၊ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းလာခြင်းသူငယ်အိမ်ကျယ်လာခြင်း။ လျှာခြောက်လာခြင်း ။ယခုဖြစ်ပျက်နေသော အဖြစ်အပျက်တိုများနှင့် အချိန်တို့ကို မမှတ်မိတော့ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
သွေး၁ မီလီ လီတာတွင် အရက် ၂-၃ မီလီဂရမ်သည် ရှိနေသော ပမာဏဟု သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည။် ထိုအချိန်တွင် အရက်သေစာ သောက်သုံးထားသူသည်>နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သည်မှ သတိလစ် မေ့မျောသွားသည် အထိ ရှိတတ်ခြင်း။ဦးဏှောက်ရှိ အစိတ်အပိုင်း တချို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို နှိပ်ကွပ်သဖြင့် အသက်ရှုသည့် လုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာ မလုပ်နိုင်ကာ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း။သား ငယ်အိမ်ကျဉ်းလာခြင်း။ကိုယ်အပူချိန် သာမန်ထက် လျော့ကျလာခြင်း ။နူတ်တ်ခမ်းများ ပြာလာခြင်း။ခြေဖျားလက်ဖျားများ အေးစက်လာခြင်း။
ထိုပမာဏကို ရေရှည်စွာ သောက်သုံးသူများတွင် သန္ဓေမအောင်နိုင်ခြင်း။လူမှုကျင့်ဝတ်များ ဖောက်ဖျက်လာခြင်း။
ထို့အပြင် မိမိသောက်သုံးသော အရက်အမျိုးအစား၊ ပြင်းအား၊ များကိုမူတည်၍ မိမိသောက်သုံးသင့်သည့် ပမာဏကို တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
တခါသောက်ဟု ဆိုရာတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အောက်ပါ အတိုင်းအဆများကို ဆိုလိုပါတယ်။
1 drink = အရက်အပြင်းစား 44.36 ml ( လက်ဘက်ရည်ကြမ်းတခွက် )
1 drink= ၀ိုင် 147.8676 ml ( ဘက်ဘက်ရည်အချိုပုဂံတလုံး)
1 drink= alcohol ပမာဏ ၆ %မှ ၉ %ထိပါဝင်သည့် ဘီယာ 207.015ml (ပုံမှန်ဖန်ခွက် မပြည့်တပြည့် )
1 drink= အိမ်တွင် လုပ်သောဝိုင် 295.735 ml
1 drink= ဘီယာ 354.882 ml စသည်ဖြင့် အကြမ်းဖျင်း တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
တနာရီအတွင်းတွင် 1 drink သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသားများတွင်
• စိတ်ဖိစီးမှုများ ပြေလျော့ခြင်း၊
• သက်တောင့် သက်သာရှိခြင်း၊
• ကားမောင်းနိုင်သည့် အရည်အသွေးများလျော့ကျခြင်း
တနာရီအတွင်းတွင် 1 drink သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသမီးများတွင်
• အထက်ပါ လက္ခဏာများ ပိုမိုပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
နှစ်နာရီအတွင်းတွင်3drink သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသားများတွင်
• အာလေး လျှာလေးဖြစ်လာခြင်း
• အသေးစိတ် အာရုံစိုက်၍လုပ်ကိုင်နိုင်သော အရည်အသွေးများပိုမိုလျော့ကျလာခြင်း၊
• တန်ပြန်တုံ့ပြန်မှုများ နှေးကွေးလာခြင်း
• စိတ်ဓါတ် တက်ကြွလာခြင်း
• ပုံမှန် ပြုလုပ်လေ့မရှိသော အမူအကျင့်များ၊ စကားများကို ပြုလုပ်ပြောဆိုလာခြင်း၊
• အပြော အဆို အပြုအမူများ ညစ်ညမ်းလာခြင်း
နှစ်နာရီအတွင်းတွင်3drink သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသမီးများတွင်
• မတ်တပ်ကောင်းကောင်းမရပ်နိုင်တော့ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင် တော့ခြင်း၊
• မှတ်ဥာဏ်ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း။
သုံးရီအတွင်းတွင်5drinks သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသားများတွင်
• စိတ်အတက်အကျ မြန်လာခြင်း (ငိုခြင်း ရယ်ခြင်းများ တခဏတွင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း)
သုံးရီအတွင်းတွင်5drinks သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသမီးများတွင်
• ဆင်ခြင်တုံတရား အလွန်ကင်းမဲ့လာခြင်း
• မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ခြင်း
• အရာဝတ္တုများကို နှစ်ထပ်မြင်လာခြင်း၊
• အရောင်နှင့် အတိမ်အနက်ကို မမှန်းစနိုင်တော့ခြင်း
လေးရီအတွင်းတွင် 10 drinks သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသားများတွင်
• ကိုယ်အလေးချိန် ၁၇၅ ပေါင်အောက်နည်းသော အမျိူးသားများတွင် အရက်ကြောင့် ဖြစ်သော အဆိပ်ကြောင့်
• အသက်အန္တရာယ် ရှိသည်အထိ ဖြစ်တတ်ခြင်း။
လေးရီအတွင်းတွင် 10 drinks သောက်သုံးခဲ့သော အမျိုးသမီးများတွင်
• အရက်ကြောင့် ဖြစ်သော အဆိပ်ကြောင့် အသက်အန္တရာယ် ရှိသည်အထိ ဖြစ်တတ်ခြင်း
• ခံစားချက်မဲ့သွားခြင်း သတိလစ်မေ့မျောသွားတတ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပျော်ရွှင်ချင်လို့ ဒါမှမဟုတ် မဖြစ်မနေမို့ အရက်သေစာကို သောက်သုံးရမည့် သူများ သောက်သုံးလျှင် ကိုယ့် အတိုင်းအတာကို ကိုယ်သိနိုင်ပြီး ၊ မလိုလားအပ်သော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရှုပ်အထွေးများမှ ကင်းရှင်းနိုင်ဖို့ လက်ဆောင် တခုအနေနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: အရက်နဲ့ မြည်းရင်တော့ ငါးသံပုရာပေါင်းတို့ ပင်လယ်စာတို့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်တွေကို ခုံမင်တယ်။
black chaw says: ကိုနေကြီး ရဲ့ လက်ချာကို
အရက်သမား ကျွန်တော် လည်း
lu lu says: မနက်ခင်းလေးမှာနိုးလာတယ် အရင်ဆုံးမင်းကို
လွမ်းပါတယ် . . .
နေရာတိုင်းမှာ သူ ရှိတယ် နော်
Crystalline says: မနက်​​စော​စော..​ဈေးဖက်​​လျောက်​ရင်း… မဖွင့်​​သေးတဲ့အရက်​ဆိုင်​​ရှေ့.. လူ့သ​ကောင့်​သား..အရွယ်​​ကောင်း၎​ယောက်​…
ဝိရိယ​ကောင်းစွာ ဆိုင်​တံခါးအဖွင့်​​စောင့်​​နေကြတယ်​… ​တော်​​တော်​ကို…စိတ်​ပျက်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မြင်​ကွင်းပဲ… ကိုယ်​တိုင်​က ဟိုစပ်​စပ်​ဒီစပ်​စပ်​သမားမို့… အူရိုင်းမဖြစ်​​အောင်​ အကို​တွေနဲ့ပူးတွဲ​လေ့ကျင့်​ထားသူ​ပေမယ့်​… အဲ့ဒီမြင်​ကွင်းမျိုး​တော့…အ​တော်​စိတ်​ကုန်​တာ..
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: အရက်က ၃၁ဘုံမှာ လူ့ပြည်နဲ့ အသူရာပြည် (စိတ်ထင်) မှာပဲ ရတာဆိုတော့….
တော်ရုံတန်ရုံ ဘုန်းကံနဲ့တော့ အရသာခံနိုင်ကြတာ မဟုတ်တော့
ဘုန်းကြီးသူများလို့ အောက်စဆွဲပြီး လိုရာသွင်း ရေးလိုက်ပါတယ်. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးမှာ..အရူပဗြဟ္မာ ပါသဗျ…။
အဲဒီဗြဟ္မာကြီးတွေ.. ရူပ.. ရုပ်မရှိပဲ… စိတ်ချည်းနဲ့.. နှပ်နေနိုင်တာ… စိတ်က.. ယစ်မူးနေလို့ပဲ..။
ယူအက်စ်အမ်အိုင်တီ စက်မှုတက္ကသိုလ်သုသေသနမှာ.. လူဟာ..တရားထိုင်ရင်… ဦးနှောက်က..(မူးယစ်ဆေးသုံးရင် ထွက်သလို)ဓာတ်တမျိုးကိုထုတ်ပေးတယ်လို့…ဆိုပါတယ်..။
အဲဒီဓာတ်က.. ရုပ်မှာထုံတာကျင်တာ.. နာတာကိုက်တာ… အကုန်လွှမ်းမိုးလိုက်ပြီး.. စိတ်ထဲ.. ခန္ဓာ..ရူပကိုဖျောက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပဲ..။
ပြောချင်တာက…. အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေ.. မူးယစ်စေတာတွေ…စွဲနေတာဖြစ်..။ =
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး (အပြစ်ရှိသောအရပ်) –
၃. ပြိတ္တာ အပါယ်လေးဘုံမှာ ဖြစ်နေခြင်း။
၄. ဘုရားပွင့်တဲ့အခါ လွန်စွာ အသက်ရှည်ပြီး ဘုရားရှင်ကို မဖူးတွေ့နိုင်တဲ့ အသညသတ်ဗြဟ္မာ နဲ့ အရူပဗြဟ္မာ ဖြစ်နေခြင်း။
၅. ဘုရားရှင်နဲ့ ရဟန်းတော်များ မရောက်နိုင်ရာ အစွန်အဖျား ပစ္စန္တရစ် အရပ်မှာ ရောက်နေခြင်း။
၆. ဘုရားပွင့်ဆဲအခါ မိစ္ဆာ ဒိဌိဥာဏ်ရှိသူ ဖြစ်ခြင်း။
၇. ဘုရားပွင့်ဆဲအခါ တရားကို နားလည်လောက်တဲ့ ဥာဏ်မရှိခြင်း။
၈. တတ်သိနားလည်လောက်တဲ့ ဥာဏ်ရှိပေမဲ့ ဘုရားမပွင့်တဲ့အခါ လူဖြစ်နေခြင်း။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: တရားထိုင်​ရင်​ ဖိုးချရင်​ ထွက်​တာက endophin ထင့်​
အန်​ဒိုဂျီးနပ်​စ်​ နဲ့ အိပ်​ဇိုဂျီးနပ်​စ့်​ သ​ဘောတရား​တွေ​ကြောင့်​
တရားသမားက ဘာမှမဖြစ်​ဘဲ ဘစ က ကျန်းမာ​ရေး​တွေထိသ​ပေါ့
အဲ ဂွတ်​​နေတာ​လေးကို စွဲ​နေရင်​​တော့ မ​ကောင်းဘူး​ပေါ့
ခန္ဒာရှိလျက်​ ဂွတ်​​နေလို့ ခန္ဒာကို​မေ့ ​ဝေဒနာ​မေ့ ​နေတာနဲ့
​ဝေဒနာတည်​စရာ ခန္ဒာမရှိတာ မတူစ​ကောင်း
ထည့်​စရာမရှိတဲ့ ဗြမာ့ကိုယ်​ထဲ လူဦး​နှောက်​ထည့်​မ​တွေးပါနဲ့​လေ
:-) သ​ဘောပါရဲ့လား ပိတ်​သတ်​ကြီး
kai says: အရူပ ဆိုတာကို.. ခန္ဓာ..ရုပ်…တကယ်ကြီးမရှိနေဘူးယူတယ်ပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဆက်​ဆွဲရင်​ အနှီဗြမာဆိုတာဂျီး တကယ်​ရှိတယ်​ ယုံသလားနဲ့ ဂိတ်​စပီး အ​ဗေတာရုပ်​ရှင်​နဲ့ ဂိတ်​ဆုံးအူးမယ်​
ရှိသည်​ပဲထား လူသားနဲ့ဗြမာ ဆဲလူးလာစလယ်​ဗယ်​ ​မော်​လီကျူးလားလယ်​ဗယ်​ကအစ မတူနိုင်​မှာမို့ ဘားမှ ဆက်​မ​ပြောဘဲ
ပဲခူးရိုးမတ​နေရာမှာ လိပ်​ပြာလိုက်​ဖမ်းပီး ယပ်​​တောင်​ခပ်​​ပေး​နေပါသီ
kai says: ကျောက်တုံးတွေ… လေတွေ.. လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေ… ဘက်တီးရီးယားတွေ.. အဲဒါတွေက.. ဘုံအဆင့်ဆင့်ဘုံသားတွေလို့… ဟိန္ဒူသာသနာကယူဆပုံရပါတယ်..။
တရားထိုင်…ဇျာန်ကျင့်..ယောဂကျင့်. ဒါတွေကလည်း.. ဂေါတမဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကတည်းက…ရှိနေတဲ့… အကျင့်တွေပါ…။
ဗုဒ္ဓဘာသာ… သာသနာနဲ့မဆိုင်….ရေးတယ်မှ.. တယ်မဆိုင်…။
ဘုရားမဖြစ်ခင်က.. ဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်ကျင့်တာကိုတောင်.. မှားတဲ့အကျင့်ဆိုပြီး… ဂေါတမဗုဒ္ဓက..ပယ်ပါတယ်..။
ဟိန္ဒူဘာသာမှားသလားဆိုတော့… မမှားတဲ့အပြင်မှန်နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေ… တွေ့နေလာပါတယ်…။
ပြောချင်တာက….၀ိုင်ယာလက်စ်အင်တာနက်.. တိမ်ပေါ်မှာသိုမှီးထားတာတွေဟာ.. အရူပဗြဟ္မာများဖြစ်ပါကြောင်းရယ်…. လို့..။
ဖေ့စ်ဘုတ်ဟာ… ရုပ်…ရူပမရှိ… အရူပဗြဟ္မာကြီးလို့…
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးထဲပါသမို့.. ရှောင်ကြ.. ရှားကြ…လို့… ရော့ကီးတောင်တန်းတနေရာက.. ထင်းရူးသီးကောက်ရင်း..ဆီးနှင်းပွင့်မြိုပြောလိုက်ရပါကြောင်း.. Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အဘနီ
ကျနော်က အဖော်တွေနဲ့သောက်မိရင် အတော်နဲ့ အိမ်ပေါ်မရောက်တာမို့
အခုတော့ ရုံးအပြန် ဈေးဝင် ပြီးရင် ရပ်ကွက်ထဲက ဘိုဘိုဟန်ကြီးဆိုင်မှာ ၄ ပက်ပုလင်းလေးဝယ်
အိမ်ပေါ်ရောက် ရေချိုး ၊ ဟင်းချက်ရင်း ပုလင်းဖွင့် ၊ ဟင်းအကျက် ၄ ပက်ကွက်တိအကုန် ထမင်းစားဖို့အသင့်မို့ မဆိုးဘူးဗျ ၊
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 238
ရွှေမိုးတိမ် says: ကိုယ်တွေ့ပို့စ် ကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့လေ့လာသွားပါကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.